माओवादी केन्द्रको काठेखोला गापाको अक्षतेमा शुभकामना आदनप्रदान ! – ebaglung.com
माओवादी केन्द्रको काठेखोला गापाको अक्षतेमा शुभकामना आदनप्रदान !
२०७४ बैशाख १, शुक्रबार २१:१६	थप समाचार
बागलुङ, २०७४ वैशाख १ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) काठेखोला गाउँपालिकाले नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर केसीले गाउँपालिकाको केन्द्र अक्षेतेलाई बनाउनुपर्ने बताए । सबै दृष्टिकोणबाट अक्षेतेक्षेत्र केन्द्र निर्माणको लागि उपयुक्त हुने केसीको भनाइ छ ।
उनले मुलुकले हाँसिल गरेका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । स्थानीत तह हुँदै केन्द्रसम्मको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको सनिश्चिता प्रदान गर्ने केसीको भनाइ थियो ।
समाजको अग्रगामी परिवतर्नको लागि अगुवाइ गरिरहेको माओवादी केन्द्र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो शक्तिको रुपमा अघि आउने केसीले बताए । उनले देश व्यापी रुपमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा जनलहर सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट तोरणध्वज मल्ल, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट बद्री भण्डारी, अक्षेते प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज महेश रायमाझी, दुर्गा भण्डारी लगाएतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । अक्षेतेस्थित केन्द्रको कार्यालय परिसरमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन काठेखोला गाउँपालिकाका पार्टी अध्यक्ष कृष्ण थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
निसी दलित युवा क्लबको प्रावासमा इकाइ समिति गठन, नया बर्षको शुभकामना आदानप्रदान !
हरिलक्ष्मी/नारायणप्रसाद स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार बराल र निशानीलाई प्रदान !